Clicky Web Analytics သည်ထပ်မံပြုလုပ်သည်။ | Martech Zone
Clicky Web Analytics သည်ထပ်မံပြုလုပ်သည်။
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 21, 2007 စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 21, 2007 Douglas Karr
ကလစ်နှိပ်သော Web Analytics အခြားအကြီးအအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူမှတဆင့်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်!
ဒါဝဘ်ပါ analytics အထူးသဖြင့်ဘလော့ဂါများနှင့်ဝက်ဘ်ထုတ်ဝေသူများအတွက်ငါလျင်မြန်စွာငါတွေ့ခဲ့သမျှသောအကောင်းဆုံးအစုအဝေးဖြစ်လာသည်။ ဒိုင်ခွက်တွင်တိုင်းတာရန်အလွန်အရေးကြီးသည့်မက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ အားလုံးသည်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းမှဖြစ်သည်။
ဒီမှာ Dashboard အသစ်
21:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 17
သငျသညျ Doug အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်၏မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာခဲ့ကြပြီလော .. တချို့ကသိပ်ပျော်မွေ့ကြသည်မဟုတ် ... စနေနေ့နေ့လည်ခင်းတွင် LOL ဖတ်နေသည်
21:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 31
ငါ့မှာစတိဗ်ရှိတယ်။ ငါမအံ့အားသင့်ဘူး ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို 'တိုးတက်အောင်' လုပ်သည့်အခါသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်အသစ်တစ်ခုထွက်လာတိုင်းဤတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ တကယ်တော့, ရှေးရှေးပြောင်းလဲမှုကိုမကြိုက်ဘူး။ တိုးတက်မှုရှိရင်တောင်
ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မှတ်စုတစ်ခုပါ မည်သည့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း! ပိုပြီးရိုးရှင်းပါတယ်။
23:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 18
၎င်းသည် Google Analytics than ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
24:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 47
အခြားသူများက Clicky နှင့် Google Analytics မှဘေးထွက်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အချက်အလက်များကိုပြန်ပေးနေသည်ကိုသတိပြုမိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၌ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိပြီး၊ ကလစ်ကီသည်မကြာသေးမီကထည့်သွင်းပြီး Google ထက်ကွဲပြားသောအချက်အလက်များကိုပြနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နေ့မှာဂူဂဲလ်သည်ထူးခြားတဲ့ 18 ည့်သည် ၁၈ ယောက်ကိုပြခဲ့ပြီး၊ ထိုနေ့မှာပဲကလစ် ၄၈ ယောက်ပြသခဲ့တယ်။ ဒါကတစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်ပျက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာအထုပ်တစ်ခုသည်ဒေတာကိုသတင်းပို့လိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲအခြားတစ်ခုသည်အတုအချက်အလက်များကိုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟု ပို၍ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ကစ်ကီတွင်မှန်ကန်သောအချက်အလက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆသော်လည်းခြားနားချက်သည်အဘယ်ကြောင့်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိနိုင်ပါ။
25:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 03
Josh၊ လည်ပတ်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များကဲ့သို့သောအခြားနံပါတ်များသည်သူတို့နှင့် ပို၍ နီးစပ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များကို IP လိပ်စာဖြင့်ယခုပင်တွက်ချက်သည်။ ၎င်းကိုကွတ်ကီးများနှင့်ပိုမိုတိကျအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအခြားအပလီကေးရှင်းများနည်းတူ၎င်းကို ၁၀၀% မှန်ကန်စေရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ (အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် cookies များကိုပိတ်ထားသည်။ )
ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဂူးဂဲလ်၏နံပါတ်များသည်ငါတို့ထက် ပို၍ တိကျသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်အလိုရှိနေသည်။ သူတို့မှာသောင်းနှင့်ချီသောဆာဗာများရှိပြီး Analytics, ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဗာ ၁၀ ခုခန့်ရှိသောကုမ္ပဏီငယ်လေးတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိတစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည်။ ဘဏ်ထဲမှာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးမရှိဘဲယှဉ်ပြိုင်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။